မင်္ဂလာဦးည ရင်ခုန်သံ ”အားးးးးးး!!! ” ​အော်​သံကြား​ပေမယ့် ဒါသဘာဝပဲ​လေ ဆိုပြီး အိမ်​သားများ မသိချင်​​ယောင်​​ ဆောင်​​နေလိုက်သည်…
မင်္ဂလာဦးည ရင်ခုန်သံ ”အားးးးးးး!!! ” အော်သံကြားပေမယ့် ဒါသဘာဝပဲလေ ဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည်… ” မင်္ဂလာဦး ည ရင်ခုန်သံ ” ” အားးးးးးး!!!” အော်သံ ကြားပေမယ့် ဒါ သဘာဝပဲလေဆိုပြီး အိမ်သားများ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် …။ မင်္ဂလာဦး ညပေးကိုးးးးး အော်သံကြားပြီး သိပ် မကြာလိုက်. . . လူပြိုကြီး Moe Aung အသံနက်ကြီးဖြင့် ” အမေနဲ့ အဖေတို့ရေ လာကြပါဦး ဘာဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး ” “ဟာဒုက္ခတော့ များပြီနဲ့ တူတယ် ယောက်ျားရေ တော့ သားကို သွားကြည့်ဦး´” …
မိန်းမတစ်ယောက် တစ်ကယ်စိတ်ကုန်သွားပြီဆိုရင် ဖြစ်လာမယ့်အရာ (၅) ခု
မိန်းမတစ်ယောက် တစ်ကယ်စိတ်ကုန်သွားပြီဆိုရင် ဖြစ်လာမယ့်အရာ (၅) ခု မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မ်ိသွားတဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ စိတ်မကုန်တတ်ပါဘူးနော် ….။ ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်အောင်လုပ်လုပ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ပျက်အောင်လုပ်လုပ် လွယ်လွယ်နဲ့ စိတ်မကုန်တတ်သလို၊ အရမ်းလည်းခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့အရူးအမူးချစ်ရတဲ့ သူအပေါ်မှာ တကယ်စိတ်ကုန်သွားပြီဆိုရင်လည်း သူတို့လောက်ပြတ်သားတဲ့သူ မရှိတော့ပါဘူးနော် …. ။ဒါကြောင့် သင့်ကို အရူးအမူးချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ကုန်အောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့နော် … ။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ အရမ်းရှားသွားပြီ မို့လို့ပါပဲ … ။ (၁) ဂရုမစိုက်တော့ဘူး သင့်ကို အရူးအမူးချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် တကယ်စိတ်ကုန်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ …
သင့်ကိုအသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ(5)မျိုး
သင့်ကိုအသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ(5)မျိုး အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားချင်းဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးပါ။ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါ။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးလား ။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပို လိမ္မာပါတော့နော် … (၁) သင့်ကို အမြဲဂရုစိုက်တယ် ” သင့်ကို အသက်နဲ့အမျှ ချစ်တဲ့ယောကျာ်းဆိုတာ သင့်ရဲ့ အရာအားလုံး အသေးအမွှေားလေးတွေကစ ဂရုစိုက်နေတတ်သူပါ။ တကယ်လို့ သင်နေမကောင်းခဲ့ရင်တောင် အဖေတစ်ယောက်လို ၊ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် ဆေးသောက်ဖို့ ၊ အစားပုံမှန်စားဖို့ကို တဖွဖွ မှာပြီး ဂရုစိုက်နေတတ်တယ်။ သင်နေမကောင်းဖြစ်ရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံယူနေသူပါ။ သင်အားငယ်နေချိန် သင့်အနားမှာ ဖေးမကူညီတတ်ပြီး သင်ဝမ်းနည်းရင် သူ့စိတ်ထဲလည်း မကောင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူ့အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ …
Online ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ဦးကို ပါးရိုက်တဲ့ကိစ္စ သားသခင်မှ အခုလိုဖြေရှင်း
Online ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ဦးကို ပါးရိုက်တဲ့ကိစ္စ သားသခင်မှ အခုလိုဖြေရှင်း မပြောမဖြစ်တော့လို့ ပြောရတော့မယ် ။ Online ပ်ါက ဖွတာလောက်နဲ့ လမ်းမဆုံးဘဲ အမှန်သိဖို့ လိုအပ်ပြီထင်လို့။ ပြဿနာက Nov 1 တစ်နေ့က စဖြစ်တာ…. သူ့ရည်းစား KMH ဆိုတဲ့သူက ကျနော်နဲ့ ‌MPW ရဲ့ ပတ်သက်မှုကို MPW ရဲ့ Facebook acc ထဲကို ဝင်ကြည့်ပြီး ဘယ်သူ့မျက်နှာကို မှမထောက် စပြီးဖွတယ် …။ အဲ့ဒီအချိန် MPW က ကျနော့်ဘေးမှာရှိတယ်။ဒီအချိန် ကျနော့်နေရာကပေါက်ကွဲမှု ကိုယ့်ရည်းစားက ကိုယ်မသိရဘဲ ကိုယ့်အပြင် တခြားရှိတယ်ဆိုတာ သိရတဲ့ခံစားမှုရယ်….အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ်လည်းဘာမှ အကြောင်းအရင်းမသိရဘဲ …
တူ၊တူမလေးတွေရဲ့ အန်တီဖြစ်နေရတဲ့သူလေးတွေမှာသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အားသာချက်များ
ကိုယ်က မတ်မတ်အရွယ်ဆိုပေမယ့် တူတွေ၊ တူမတွေရှိလို့ အန်တီဖြစ်နေရတဲ့သူလေးတွေ ရှိလား..။ တူ၊တူမလေးတွေရဲ့ အန်တီဖြစ်နေရတဲ့သူလေးတွေမှာ ဒီလိုအားသာချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ (၁) ကလေးဆန်လို့ရတယ် ကလေးတွေနဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေ အတူတူကြည့်၊ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ အတူတူဖတ်၊ ကစားနည်းမျိုးစုံကစား၊ ဂိမ်းတွေဆော့ … အဲ့ဒါတွေ လုပ်ရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သင်ငယ်ငယ်က အချိန်တွေ ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားချက်မျိုးကို သူတို့တွေကြောင့် အမြဲပိုင်ဆိုင်ရပါတယ်။ (၂) ကလေးတွေရဲ့စံပြ သင်က မလှတဲ့သူတစ်ယောက်၊ မတော်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေရင်တောင် သူတို့ထက်တော့ ဗဟုသုတကြွယ်ဝတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူတို့အတွက်တော့ စံပြဖြစ်ပါတယ်။ (၃) သူတို့ရဲ့ရင်ဖွင့်ဖော် သူတို့လေးတွေရဲ့ အထင်အမြင်တွေနဲ့ခံစားချက်တွေကို အများဆုံး သိရတဲ့သူက သင်ဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ အဖေ၊ အမေတွေကို ဖွင့်မပြောရဲတဲ့ …
နှစ်ကိုယ်တူ အောင်မြင်စွာကြိုးစားဝိတ်ချခဲ့ကြတဲ့ သူတို
တကယ်တမ်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်လာတဲ့အခါ ပြင်ပပုံပန်းဟာ အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ အချစ်စိတ်တွေ အထွတ်အထိပ် ရောက်လာတဲ့အခါ အပြန်အလှန် ကတိတွေထားပြီး တစ်ဦးတည်းသောသူအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ ချစ်တဲ့သူအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ ပေါင်(၃၃၀) ၀ိတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အခါ… (၆) လ အတွင်း မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမ… အသက်အရွယ်ရလာပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ၀ိတ်လျော့နိုင်ခဲ့ကြသူများ မင်္ဂလာပွဲလေးမတိုင်မီ လုံးဝပုံစံပြောင်းလဲခဲ့ကြတဲ့ သူတို့.. နှစ်ယောက်ပေါင်း အလေးချိန်ပေါင်(၃၃၀) လောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ အခါ… (၂) နှစ်ကျော်အကြာမှာ လုံးဝပြောင်းလဲသွားကြတဲ့ စုံတွဲ… (၁) နှစ်ကျော်ကျော်လေးနဲ့ ပုံစံပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ… လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ ကလေးမယူနိုင်မှာစိုးလို့ …
ပါးစပ်မပိတ်နိုင်လောက်အောင်ရယ်နေရတဲ့ သုသုရဲ့ ဟာသ Video အသစ်
အလှဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သုသုကတော့ ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်ရအောင် ဟာသ Video လေးတွေနဲ့ အမြဲဖျော်ဖြေ တတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ Video လေးတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေးရေပန်းစားပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ယောကျာ်းနှစ်ယောက်က သူမကိုဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တဲ့အချိန်မှာ သူမကိုယ်တိုင်က ပြန်ပြီး လက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ပုံစံလေး ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုလည်းရယ်မောရအောင်အမြဲဖန်တီးပေးလေ့ရှိတဲ့ သုသုကိုလည်း ပရိသတ်တွေက တော်တော်လေးချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ Video လေးဟာ တင်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ လူတစ်သိန်းကျော် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး သူမကိုလည်းချစ်ခင်ကြတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတော့ချစ်တာပေါ့နော်။ Video လေးကို ” အားနွဲ့သူပါရှင် ” ဆိုပြီးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းအားနွဲ့သွားတာ က သုသုမဟုတ်ပဲ ဆွဲလား ရမ်းလားလုပ်တဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာတော့ ရယ်ချင်စရာပါ နော်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သုသုရဲ့ …
” တရုတ်နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီးဂီတပညာရှင် ဝူဝေနဲ့အတူ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေတဲ့ အေမြဖြူ “
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားလှအသံလေးနဲ့ တည်ငြိမ်စွာ သီချင်းတွေကို သီဆိုနိုင်တဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြဖြူကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီးဂီတပညာရှင် ဝူဝေနဲ့အတူ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။သူတို့(၂)ဦးရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကိုတော့ “Chinese Sheng Virtuoso Wu Wei နဲ့ MEBC ကျောင်းသူ အေးမြဖြူတို့ရဲ့..မတူညီတဲ့ အသံတွေပေါင်းစပ်မှု… MusicArt Project Art director: Sigune von Osten (President of MEBC) ” လို့ MEBC – MusicArt Academy ရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အတူ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အေးမြဖြူကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းကသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတွေရခဲ့တဲ့ …
ဘယ်တော့စားရမလဲလို့မေးနေတဲ့သူတွေကို ရက်အတိအကျနဲ့ပါ အဖြေပေးလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
ဘယ်တော့စားရမလဲလို့မေးနေတဲ့သူတွေကို ရက်အတိအကျနဲ့ပါ အဖြေပေးလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအသည်းတယားယားဖြစ်နေရတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ သူမကို စနောက်နေတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်အရွှန်းဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေကို အမြဲတမ်း စနောက်တတ်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းက ” ဘယ်တော့စားရမှာလဲ ” ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။ အိမ်ထောင်ပြုသင့်တဲ့အရွယ်ရောက် နေတဲ့ လူလွတ်တွေကို ဒီစကားလေးနဲ့အမြဲတမ်းစနောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ချီချီ့ကိုလည်း ခင်မင်ရသူတွေကနောက်လိုက်ပုံပါပဲ။ ချီတစ်ယောက်ကတော့ နောက်ပြောင်တဲ့စကားလေးကို ခပ်ရွှတ်ရွှတ်လေး ပြန်ဖြေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ” ဘယ်တော့စားရမလဲဆိုတော့ ၂၀၂၀ January ၂၅ ရက်နေ့ ” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ စာလေးတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်တွေကတော့ သူမတကယ်ပဲ အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာ လားဆိုပြီး ရင်ခုန်သွားခဲ့ ပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ ဒါဟာသူမရဲ့မွေးနေ့ရက် ဖြစ်ပါသတဲ့ …
This Month : 33769
This Year : 204995
Total Users : 500128
Total views : 2069522